Waa maxay macquul?
Sidee Ayuu Shaqeyn Karaa?
Faa'iidooyinka Shahaadada Aasaasiga ah:
Ansible waa mid cusub iwm qalab oo yimid ka dib kalluunka iyo hilibka ayaa horeyba u aasaasay ciyaartoyda suuqa. Waxay leedahay hab kala duwan oo lagu xallin karo kaabayaasha IT-da iyo maaraynta otomaatiga. Qoraaga asalka ah ee Ansible wuxuu abuuray, iyada oo ujeedadu tahay in lagu rakibo kaabayaasha, waa in aan lagaa rabin inaad barato barnaamijka. Si aad ugu xirto adeegyo fog oo loo baahan yahay in la maareyn karo, lama ogola inay isticmaalaan ssh * nidaamka saldhigga ah iyo winrm (maaraynta kumbuyuutarrada) nidaamyada ku saleysan daaqadaha. T
Tababbarka Cadaaladda waxaa loo malaynayaa in uu noqon karo mid fudud, qarsoodi ah, la iskudhin karo oo si fudud loo barto. Tilmaamaha / talaabooyinka / hawlaha la qabanayo ayaa lagu qoray Yamla. Hawlaha waxaa loo fuliyaa si taxadar leh. Xaaladda, waxaa nalooga baahan yahay inaan sheegno xaaladda nidaamka. Tusaale ahaan: xirmo waa in la rakibay. Sidee loo dhejin karaa, taas oo loola dhaqmo / maamulay nidaamka, ma'aha inaan ka walwalno wax badan. Haddii xirmadaas hore loo rakibo, ka dibna la aamini karo ayaa iska indhotiri doonta tallaabadaas. Tan waxaa loo yaqaan 'idempotence'.
YAML, Waa qaab fudud oo qoraal ah, oo sahlan in la akhriyo oo qoro labadaba dadka iyo sidoo kale mashiinada. Saaxiibka ku faafaya baqdinta wuxuu ku dhacaa wax loogu yeero modules. Modules waxaa lagu qori karaa luqad kasta oo barnaamijka ah. Ansible waa mid dhakhso ah oo uma baahna wakiil kasta oo lagu rakibo server-yada la beegsanayo. Xitaa waad isticmaali kartaa adoo isticmaalaya qalabka router / switches, midka lagu taageerayo Caqli ahaan (oo waa liiska liiska).
Haddii aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad si qotodheer u qoto Caqli-gal ah oo aad sameysatid nidaamyadaada gaarka ah, kaliya markaa, waxaa lagaaga baahan yahay inaad barato ama aad barato luuqada barnaamijka.
Mid kale oo muhiim ah faa'iidooyinka Ansible waa in ay tahay ilaha bilaashka ah iyo furan. Waxaa ku qoran Python iyo qof kasta oo fahmi kara gawaarida ayaa akhrin kara koodka oo wax ka beddelaya haddii loo baahdo si loo daboolo baahidooda. Iyaga oo cambaareeyay sumcadda iyo kobcinta by warshadaha, Redhat iibsaday Ansible in 2015, oo hadda waa qayb rasmi ah ee bixinta Redhat. Ha ka welwelin suurtagal maaha mid weli bilaash ah oo furan, Redhat wuxuu sii wanaajinayaa, koodhka ka qaybgalaya iyo sii kordhaya mashruucan. Redhat wuxuu bixiyaa barnaamijka GUI ee ku salaysan shabakadda oo loo yaqaan 'Ansible Tower' waana lacag aad u qaali ah. Taasi waa sida Redhat uu lacag u sameynayo Ansible. Maqal uqalmida mashaariicda waxaay bixisaa maamul dhexe, oo ay la socdaan falanqeyn iyo warbixino wanaagsan, iyo CMDB / liiska.
Caqli-yahanku wuu ku fiican yahay Maareynta Isbedelka, Gaadiidka, Bixinta iyo Orchestration. Iyada oo hal qalabkan aad maamuli karto server-kaaga iyo sidoo kale codsiyadaada. Taas macnaheedu maahan in loo baahnayn in la barto qalab kasta oo loo adeegsado dalabka sida capistrano, dhar iwm.
Koorsada la xidhiidha:
Shahaadada Aasaasiga ah ee Gurgaon
Gaadiidka oo leh Ansible